प्रसिद्ध गायक शम्भु राई र झमक घिमिरे धनकुटा प्रतिभाद्धारा पुरस्कृत र शिवकुमार श्रेष्ठ सम्मानित गरिने
गत १० अप्रिलका दिन वेलायतको सर्नकिल्फमा सम्पन्न धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान (कोष) वेलायत च्याप्टरको बैठकले र सोहि संस्था नेपाल च्याप्टरको ११ अप्रिलका दिन धनकुटामा सम्पन्न बैठकले २०६५ सालको लागि धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार गायन कला तर्फ प्रसिद्ध आधुनिक तथा लोक गायक शम्भु राई, साहित्य तर्फ वरिष्ठ युवा सहित्यकार झमक घिमिरेलाई प्रदान गर्ने र वरिष्ठ इतिहासविद् शिवकुमार श्रेष्ठलाई यस बर्षको सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो।
कला साहित्य, खेलकुद तथा विविध क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गत बर्ष वेलायतमा स्थापना भएको धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोष धनकुटा जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा दर्ता भई हाल दुई देशमा यसको च्याप्टर समानान्तर संचालन हुदै आएको छ। विश्वको विभिन्न मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण धनकुटेलीहरु यस संस्थाको स्वत सदस्य रहने प्रावधान अनुसार संस्थाको लागि सहयोगि दाताहरु पनि विभिन्न मुलुकमा रहेका छन्। विभिन्न मुलुकमा संस्थाको लागि कोष संकलन गर्ने कार्य पनि चलिरहेको छ भने हाल ३ लाख भन्दा बढि अक्षयकोष जम्मा भईसकेको छ।
पूर्वेली लोकगीतका सम्राट तथा आधुनिक गीतका हस्ती शम्भुराई धनकुटा जिल्लाको चुङवाङ् गाविसमा आज भन्दा झण्डै ५३ बसन्त अघि जन्मनु भएको थियो। वहाको सघर्षपूर्ण जिवन र वहाले प्राप्त गर्नुभएको सफलताले धनकुटाको छात्ति विशाल बनेको छ। गायक शम्भु राईका गीत मन नपराउने नेपालीहरु सायदै होलान। विशेषत पूर्व नेपालमा गीत भनेकै शम्भु राईको गीत सम्झन्छन्। अनवरत रुपमा वहा यहि गायन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ र हाल सम्म वहाको अनगिन्ति एल्बम र हजारौ गीतहरु हामी सामु आईसकेका छन्। वहाले एक दर्जन प्रतियोगितामा पुरस्कार हात पार्नुभए मध्ये लोक गीत प्रतियोगिता २०४१, आधुनिक गीत प्रतियोगिता २०४३, राष्ट्रिय गीत प्रतियोगिता २०४३ मा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नुभएको छ।
साहित्य तर्फ पुरस्कृत युवा स्रष्टा झमक घिमिरेको जन्म धनकुटाको कल्चिडेमा वि. स. २०३७ सालमा भएको हो। वहा जस्ता साहित्यकार संसारमा अत्यान्तै कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। घिमिरेको हातखुट्टा दुवैले काम गर्दैन। वहाले बोल्न सक्नुहुन्न। सिर्फ खुट्टाको बुढि औलाले च्यापेर राम्रो संग लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले बोलेको कुरा सबै राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। वहाले कसैबाट पनि शिक्षा लिनु भएको छैन। वहाको प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा वहा स्वयंले प्रयोग गर्नुभएको शब्दमा भन्नुपर्दा वहा शारिरीक आशक्त सापे हुनुहुन्छ। बौदिक रुपमा वहा हामी सवल मान्छेको लागि चुनौती हो। वहाको हाल सम्म डेढ दर्जन पुस्तक प्रकाशित भईसकेका छन् भने वहा कान्तिपुरमा स्तम्भ पनि लेख्नुहुन्छ। वहाले झ48डै २ दर्जन पुरस्कारहरु प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। वहाको आत्मा वृत्तान्त प्रकाशोन्मुख छ जुन अत्यन्तै लोकप्रिय बन्ने अनुमान गरिएको छ।
यस बर्ष धनकुटा प्रतिभा प्रतिष्ठानले इतिहासकार शिवकुमार श्रेष्ठलाई पहिचान गरेको छ। साहित्यकार श्रेष्ठले लिम्बुवान तथा किरातको बारेमा झ48डै आधा दर्जन पुस्तक लेख्नुको साथै विश्व राजनीतिको विषयमा विभिन्न पुस्तकहरु लेख्नु भएको छ। वहा लामो समय देखि धनकुटा बहूमुखि क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आउनु भएको छ।
पुरस्कृत तथा सम्मानित ब्यक्तित्वहरुलाई यहि आउदो २७ अप्रिलको दिन धनकुटामा एक समारोहको आयोजना गरि सरस्वतीको प्रसाद स्वरुप पुरस्कृत द्धयलाई जनही नगद रु १० हजार र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने, सम्मानित ब्यक्तित्वलाई आभार पत्र सहित नगद रु ५ हजार प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
वेलायत च्याप्टरले कार्यक्रम सफल बनाउन र कोषमा सहयोग गर्न सबैलाई आब्हान गरेको छ। धधध।मजबलपगतब।यचन।लउ मा सदस्य बन्नु भएका सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुको साथै बाँकी सबैलाई सदस्य बन्न अनुरोध गरेको छ। वेलायत च्याप्टरले यस बर्षको समर कार्यक्रम आगामी जुलाई ११ तारिखका दिन सर्नकिल्फ स्थित सम्पन्न गर्नेकुरा पनि जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमको अवसरमा धनकुटा प्रतिभा प्रतिष्ठानको स्मारिका विमोचन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र सोहि कार्यक्रममा धनकुटा समाज वेलायतको कमिटि निर्माण हुनेकुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
स्मरण रहोस, गत बर्ष यस धनकुटा प्रतिभाले नेपालमा साहित्य तर्फ मोमिला जोशि, गायन तर्फ नेपाल स्टार जित्न सफल विष्णु चेम्जोङ, खेलकुद तर्फ कराँतेमा सार्क स्तरिय खेलमा गोल्डमेडल प्राप्त गर्न सफल खेलाडि कुसल श्रेष्ठ र बरिष्ठ गायक नविन किशोर राईलाई सम्मान गरेको थियो भने वेलायतमा कुशल ब्यवसायीको रुपमा धन लिम्बूलाई सम्मान गरेको थियो।
धनकुटा जिल्लावासी परिचयात्मक भेला भब्यताका साथ सम्पन्न
गत २ अगष्ट शनिवारको दिन वेलायतमा रहेका धनकुटा जिल्लावासीहरुको परिचयात्मक भेला फक्स्टोन, केन्टमा भब्यताका साथ सम्पन्न भयो।
सबैजान उठेर नेपालको राष्ट्रिय गाना गाएर शुरु भएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नुहुने विभिन्न ब्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिएको थियो। वेलायतमा आई कुशल ब्यवसायीको रुपमा स्थापित धनबहादुर लिम्बूलाई कुशल ब्यवसायी २००८ को रुपमा सम्मान पत्र प्रदान गरियो त्यस्तै गरि उच्च तहको ड्राइभिङ शिक्षा सेवा प्रदान गर्दे आउनु भएका ओम लिम्बू र विगत ८ बर्षदेखि वेलायतमा रहदै आउनु भएका डा. सम्पूर्णानन्द ढुङ्गानालाई सम्मान पत्र प्रदान गरियो। वेलायत भ्रमणमा आउनु भएका साहित्यकार धनहाँङ सुब्बालाई पनि स्वागत पत्र प्रदान गरिएको थियो। सम्मान पछि धन लिम्बूले आभार ब्यक्त गर्दै जिल्लाको लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो। जीवनमा पहिलो पटक जिल्लावासीहरुले खादा ओडाइ सम्मान गरेकोमा आफूलाई आफ्नो जन्मजिल्ला प्रति थप कर्तब्य बोध भएको कुरा सम्मानित डा. दुङ्गनाले बताउनु भयो।
जिल्लावासी परिचयात्मक कार्यक्रमलाई रणबहादुर मगर, साहित्यकार धनहाँङ लिम्बू, पूर्व क्याप्टेन हरि लिम्बू, जय तामाङ, विन्दमान राई, पूर्व क्याप्टेन विनेन्द्र लिम्बू, यानबहादुर गुरुङ, पूर्व क्याप्टेन अमर रानाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। बक्ताहरुले जिल्लावासीहरु वीच आपसमा चिनजान हुन आवश्यक रहेको कुरा दर्शाए। जिल्लाको विकासको लागि आपसमा छलफल गरि सहयोग गर्न सकिने र वेलायतमै जिल्लावासी बीच भैपरि आउने आपतविपतको वेला सरसयोग हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औल्याए। धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोषको बारेमा सचिव विश्वास दीप तिगेलाले कोष स्थापनाको इतिहास, आवश्यकता, उद्देश्य, गतिविधि र आगामी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए। सम्पूर्ण जानकारी www.dhankuta.org.np मा राखिएको कुरा पनि उनले बताए। त्यस्तै गरि दोस्रो बर्षको लागि पुरस्कृत गर्न लायक स्रष्टाहरुको नाम पनि सिफारिस गर्न विश्वका विभिन्न ठाँउमा रहेका धनकुटेलीहरुमा अनुरोध गरेका छन्।
भेलाको क्रममा आनन्द देवान र जितेन्द्र चेम्जोङको सक्रियतामा ४ पाउण्ड धनकुटा प्रतिभा पुरस्कारको लागि सहयोग संकलन गरेका छन्। झण्डै ५ सयको संख्यामा उपस्थित धनकुटेलीहरुले परिचयात्मक कार्यक्रमले आफूहरुलाई ठूलो सहयोग पुगेको महशुस गरे भने अब चाँडै सबै क्षेत्रलाई समेटेर धनकुटा जिल्लावासी समिति बनाउने सहमति गरेका छन्।
कार्यक्रमको वीचवीचमा नृत्य प्रस्तुतिले रोचकता थपेको थियो भने साझ अबेर सम्म सामुहिक नाचगान गरेर रमाइलो गरेका थिए। पुरस्कार कोषका अध्यक्ष क्याप्टेन ज्ञान लिम्बूको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई डिल्ली राई र लोक लिम्बूले पालैपालो संचालन गरेका थिए।
स्मरण रहोस, धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोषले गत बर्ष ३ स्रष्टाहरुलाई धनकुटामै पुरस्कृत तथा एक सिनियर ब्यक्तित्वलाई सम्मान गरेको थियो भने यस कोषको अक्षयकोष थप्ने काम तेस्रो चरण अन्तर्गत जम्मा हुनेक्रम जारी छ।
धनकुटेली भेला अगष्ट २ मा हुने कुशल ब्यवसायीको सम्मान धन लिम्बूलाई
गत ३० मे २००८ का दिन र्सनकिल्फ, वेलायतमा धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार (कोष) प्रतिष्ठान वेलायत च्याप्टरको अध्यक्ष क्याप्टेन ज्ञान बहादुर लिम्बूको अध्यक्षतामा समिक्षात्मक बैठक सम्पन्न भयो ।
यस धनकुटा जिल्लावासीहरुको साझा संगठनले गत चैत्र ९ गते पुरस्कार वितरण तथा सम्मान समारोह कार्यक्रमको आयोजना गरि एक सिनियर स्रष्टा गायक नविन किशोर राइलाई सम्मान गर्‍यो । त्यसै गरि ३ विधाका युवा स्रष्टाहरुलाई नगद पुरस्कार दशदश हजारले पुरस्कृत गर्‍यो । जस मध्य साहित्य क्षेत्रमा मोमिला जोशि, संगीत क्षेत्रमा नेपाल स्टार जित्न सफल विष्णु चेम्जोङ र खेलकुद क्षेत्रमा र्सार्क स्तरिय कराते खेलमा र्स्वण पदक विजेता कुशल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम नेपाल च्याप्टर अर्न्तगत धनकुटामा सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले हाल सम्म भएका कार्यहरुको समिक्षा गरेको थियो । पुरस्कार कोषको अक्षयकोष थप्न तेस्रो चरणको कार्यक्रम शुरुभइ सकेकोले बाँकी सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ । अध्यक्ष लिम्बूले पुरस्कार वितरण तथा सम्मान समारोह कार्यक्रम सफतलापपूर्वक सम्मन्न गरेकोले नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष तथा परिवारमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो ।
बैठकले आगामी अगष्ट २ तारिखको दिन वेलायत भरि छरिएर रहेका सम्पूर्ण धनकुटेलीहरुको ब्यापक सहभागिता रहने गरि समर भेला गर्ने निधो गरेको छ । उक्त दिन छुटि्ट मिलाएर सो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिन सबै धनकुटेलीहरुलाई अग्रिम जानकारी गराएको छ । छलफल पछि यस बर्षो अन्तमा बाषिर्क स्मारिका प्रकाशन गर्ने, धनकुटा जिल्लावासीहरुको ठेगाना पुस्तिक तयार गर्ने लगायत आगामी समर भेलामा उत्कृष्ट प्रतिभा भएको छात्रछात्रालाई पुरस्कृत गर्ने र धनकुटाबाट वेलायत आई ब्यापार ब्यवसायमा लागेका धनबहादुर लिम्बूलाई कुशल ब्यवसायीको रुपमा सम्मान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
धनकुटा जिल्लावासीहरुको निमित्त संचालन गरिएको डब्लूडब्लूडब्लू डट धनकुटा डटकम डट एनपी वेभसाइटमा विश्वभर छरिएर रहेका धनकुटेलीहरुले सोचेभन्दा बढिले सदस्यता र्फम भरिसकेको कुरा वेलायत च्याप्टर सदस्य टंक मगरले जानकारी दिएका थिए । वेभसाइटले विश्वलाई जोड्ने सेतुको रुपमा काम गरेको कुरा बताए । त्यस्तै गरि कोषाध्यक्ष जितेन्द्र चेम्जोङले आर्थिक गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सुहिम याक्थुङ, केन्ट
सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
गत चैत्र ९, २०६४ का दिन धनकुटा नगरपालिकाको सभा कक्षमा धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार तथा सम्मान वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इतिहासकार शिव कुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्य तथा झमक घिमिरेको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ लोकगायक नविनकिशोर राइलाई सम्मान र साहित्य तर्फ मोमिला, संगीत तर्फ गायिका नेपाल स्टार विष्णु चेम्जोङ र खेलकुद क्षेत्रमा र्सार्क खेलमा स्वर्ण पदक विजेता कुशल श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य जनार्दन घिमिरे पाँचथरेले गर्नु भएको थियो भने, संस्था स्थापना अपरिहार्यताको बारे एस. पी. गणेश ठाडामगर र वेलायत च्याप्टर प्रतिनिधि विश्वास दीप तिगेलाले बोल्नु भएको थियो । वेलायत च्याप्टर अध्यक्ष ज्ञानबहादुर लिम्बूले पठाउनु भएको सन्देश पनि पढेर सुनाइएको थियो । सम्मानित तथा पुरस्कृत स्रष्टाहरुले आफूहरुलाई जिल्लावासीहरुले सम्झेकोमा आभार ब्यक्त गरे भने बक्ताहरुले देशविदेशमा रहेका धनकुटेली दाजुभाईहरुको प्रसंसा गरे । अतिथि बक्ता साहित्यकार रमेश पौडेलले धनकुटाले उद्धाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व तेजनारायण सिं राइले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम सचिव जयपूर्ण भूजेलले संचालन गर्नुभएको थियो ।
यस बर्षको धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार साहित्यकार मोमिला, नेपाल स्टार विष्णु र स्वर्ण पदक विजेता कुसललाई प्रदान गरिने
प्रत्येक बर्ष साहित्य, संगीत र खेलकुदको क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिइ धनकुटा जिल्लाको प्रतिष्ठा बढाउन कार्य गर्ने स्रष्टालाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस संस्थाले जन्मसिद्ध र कर्मसिद्ध धनकुटा संग साइनो भएका
सम्मान - नविनकिशोर राइ
साहित्य क्षेत्र - मोमिला जोशि
संगीत क्षेत्र - विष्णु चेम्जोङ
खेलकुद क्षेत्र - कुशल श्रेष्ठ
स्रष्टाहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो । हाल सम्म यस संस्थाको धनकुटा च्याप्टर र वेलायत च्याप्टर निर्माण भइसकेको छ । यस बर्षको लागि धनकुटा च्याप्टरले सिफारिस गरेको नामहरुको सम्बन्धमा अमेरिका, जर्मनी, हङकङ, मलेसिया, कतार, कोसभोमा रहेका धनकुटेलीहरु बीच आपसी छलफल गरि साहित्य विधामा मोमिला जोशी, संगीत विधामा नेपाल स्टार विष्णु चेम्जोङ र खेलकुद क्षेत्रबाट सार्क स्वर्ण पदक विजेता कुसल (कुसुले) श्रेष्ठलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको कुरा अध्यक्ष क्याप्टेन ज्ञान लिम्बूले बताउनु भयो । त्यस्तै गरि यसबर्ष संगीतका सिनियर स्रष्टा नविनकिशोर राइलाई सम्मान गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल स्टार विष्णु
यस बर्षको सम्मानित ब्यक्तित्व नविनकिशोर राइले थोरै भएपनि राम्रा र लोकप्रिय गीतहरु गाउनु भएको छ । वहाको स्वरहरु अमर भएर रेडियोहरुमा निरन्तर बजिरहेका छन् । त्यसवेलाको समयमा वहाले गर्नुभएको योगदान कदरयोग्य भएको कुरा प्रतिष्ठानका सदस्य आनन्द देवानले बताउनु भयो । त्यस्तै गरि धेरै स्रष्टाहरु सम्मान योग्य भएको र विस्तारै वहाहरुलाई प्रत्येक बर्ष सम्मान तथा पुरस्कृत गर्दै जानेकुरा धनकुटा च्याप्टरका अध्यक्ष तेज नारायण सिं तुप्रिहाँङले बताउनु भयो ।
महत्वपूर्ण जरुरी सूचना
यस प्रतिभा पुरस्कार कोषको विधान (परिच्छेद २ को दफा ४) बमोजिम धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार २०६४ साहित्य, संगीत र खेलकुद क्षेत्रबाट छनौट गरि घोषणा गर्नुपर्ने र तुरुन्तै पुरस्कार प्रदानको कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने भएकोले, आफूलाई उचित लागेको ब्यक्तिको नाम ourDhankuta@gmail.com वा 00447878533582 र नेपालमा 009779842046942 नम्बरमा सिफारिसको जानकारी दिनु हुन विश्वभर छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण धनकुटेलीहरुमा अनुरोध गर्दछौं ।
धनकुटा प्रतिभा छनौट कमिटी २०६४
पुरस्कार प्रदान आगामी चैत्र ९ गते धनकुटामा हुनेछ । कार्यक्रममा सबैको सहभागितालाई आग्रह गर्दछौ ।
वेलायतमा धनकुटा जिल्लावासीको परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न
नयाँ बर्ष२००८ को पहिलो दिन वेलायतको र्सनकिल्फ स्थित नयाँ बर्षको शुभ कामना आदानप्रदान गर्न धनकुटावासीहरु बीच परिचयात्मक कार्यक्रम भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
केही समय अघि स्थापना भएको धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार वेलायत च्याप्टरको सक्रियतामा आयोजित कार्यक्रममा वेलायती सेनामा कार्यरत सबै धनकुटेलीहरु स-परिवार उपस्थित भएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिनियर ब्यक्तित्व क्याप्टेन ज्ञान लिम्बूले भैपरि आउने आपतविपतको बेला छरछिमेक, आफन्त, नातागोता चाहिने भएकोले जिल्लावासीहरु बीच चिनजान हुनु पर्ने बताउनु भयो । वेलायत च्याप्टरका अध्यक्ष पनि रहनु भएका लिम्बूले प्रतिभा पुरस्कार संचालनको लागि वेलायतवासी सबै धनकुटेलीहरुमा सहभागि हुन र सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नु भयो ।
प्रतिभा पुरस्कारको स्थापनाको औचित्य, संस्थाको उद्देश्य र संस्थाको गतिविधि बारे विश्वास दीप तिगेलाले जानकारी दिनु भएको थियो । देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण धनकुटेलीहरुको सहभागिता रहने यस संस्थाले प्रत्येक बर्ष साहित्य क्षेत्रका १ जनालाई, संगीत क्षेत्रका वा खेलकुद क्षेत्रका १ जनालाई पुरस्कृत गर्ने र संस्थाले उपयुक्त ठहर गरेको कुनै पनि ब्यक्ति वा संस्थालाई सम्मान गर्ने कुरा उद्देश्यमा उल्लेख छ ।
आगामी नेपाली नयाँ बर्ष२०६५ को अवसरमा उक्त धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिने भएकोले प्रजातान्त्रिक तवरले छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढि सकेको जानकारी गराउनु भयो । धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोष कानुन सम्मत धनकुटा जिल्ला प्रसासन कार्यलयबाट दर्ता भई सकेको र संस्थाको अक्षयकोष पनि स्थापना भइसकेको जानकारी दिनु भयो । अक्षयकोष बढाउनको लागि दोस्रो चरणको कार्यक्रम घरदेश र परदेशमा चलि रहेको कुरा पनि बताउनु भयो । संस्था निर्माण तथा संचालनमा डब्लूडब्लूडब्ल्यू डट् धनकुटा डट् ओआरजी डट् एनपी वेभसाइटले सबैलाई जोड्नको लागि पुलको रुपमा काम गरिरहेको कुरा पनि उल्लेख छ ।
परिचयको कार्यक्रमबाट शुरु भएको भेलामा, फेमली तथा नानीहरुको लागि विविध मनोरंजन तथा खेलहरुको पनि आयोजना गरिएको थियो । सम्पूर्ण वेलायतमा रहेका धनकुटेलीहरुको बृहत भेला आगामी समरमा आयोजना गरिने कुरा उक्त कार्यक्रमका संचालक लोकप्रसाद लिम्बू धनकुटेले बताउनु भयो ।
धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार वेलायत च्याप्टर तदर्थ कमिटी
गत १५ सेप्टेम्बरका दिन वेलायतको र्सनकिल्फ स्थिती धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार वेलायत च्याप्टरको भेला सम्पन्न भएको छ ।
जन्मको आधारमा र कर्मको आधारमा धनकुटाका स्रष्टा कहलाएका साहित्य र संगीतका उत्कृष्ट ब्यक्तित्वहरुलाई हौसला र प्रेरणा स्वरुप प्रत्येक बर्षपुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोषको स्थापना गर्न लागिएको हो ।
उक्त भेलाले सिनियर ब्यक्तित्व क्याप्टेन ज्ञानबहादुर लिम्बू ज्यूको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वेलायत च्याप्टरको तदर्थ कमिटी गठन भएको छ । जसमध्ये उपाध्यक्ष द्धयमा धनबहादुर ठाडामगर, डिल्ली कुमार राइ, सचिवमा विश्वास दीप तिगेला, सह-सचिवमा फूर्वा तामाङ, कोषाध्यक्षमा जितेन्द्र चेम्जोङ, सहकोषाध्यक्षमा आनन्द देवान, जनसर्म्पर्क प्रमुख किरण देवान र सदस्यहरुमा लोक बहादुर गुरुङ, थमेश राइ, टंक मगर, भिम बहादुर आठपहरिया, सुरेस परिवार र बम लुम्बा रहेका छन ।
वेलायतमा कार्यरत प्रत्येक धनकुटेलीहरुले प्रतिब्यक्ति ७५ पाउण्ड उठाउने क्रमलाई त्रि्र बनाउदै आउदो २० सेप्टेम्बर भित्र बुझाई सक्न अनुरोध गरिएको छ । सहयोग रकम निम्न ठेगानामा यथाशक्दो चाडो बुझाउनु पर्ने र्सवसम्मत निर्णय भएको छ ।
Mr Thamesh Rai
त्यस्तै गरि आगामी २४ सेप्टेम्बरका दिन धनकुटा जिल्लावासीहरुको परिचयात्मक कार्यक्रमको लागि आनन्द देवानले जिम्मा लिनु भएको छ ।
सोधपुछ तथा जानकारीको लागि ०७८७८५३३५८२ मा फोन गर्नुहोला
कोसभोमा तेस्रो बैठक सम्पन्न
प्रतिभा पुरस्कारको निम्ति गत १० सेप्टेम्बरको दिन कोसोभोमा रहेका ब्रिटि्रस गोर्खाजका धनकुटेलीहरुले प्रतिब्यक्ति ७५ पाउण्ड उठाउने निर्णय गर्‍यो । केहीबाट सहयोग रकम उठि सकेको कुरा (सहयोगदाता पेजमा हेर्नुहोस) संकलनका जिम्मेवारी पाएका थमेश राइले बताउनु भएको छ । उठ्नेक्रम जारी रहेको र सबैलाई सहयोगको लागि अपिल पनि गरिएको छ । त्यस्तै गरि सिनियर ब्यक्तित्व सुनिल थापा ज्यू र एस पी गणेश ठाडामगर ज्यूले पनि चाडै आफ्नो भागको सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ । विश्वभर छरिएर रहनु भएका धनकुटेली दाजुभाईहरुमा पनि स्वेच्छाले सहयोग उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।
गृह जिल्ला धनकुटामा तेजनारायण सिं तुप्रिहाँङ र संजयसन्तोषी राइ सक्रिय रहनु भएको कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ भने वेलायतमा क्याप्टेन ज्ञान बहादुर लिम्बू र जितेन्द्र चेम्जोङ सक्रिय रहनु भएको छ ।
आगामी २३ असोज २०६४ तदनुसार १० अक्टोबर २००७ का दिन धनकुटामा स्थापनाको कार्यक्रम रहेको छ ।
धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना हुने
कोसभा, प्रिष्टिना, २९ असार, भानु जयन्तिको अवसरमा सम्पन्न एक भेलाले धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोषको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्यो । ब्रिटिस सेनामा कार्यरत धनकुटेली लाहूरेहरु वेलायतबाट कोसभोमा केही समयका लागि आएका छन । त्यहि अवसरमा धनकुटावासी नेपाल प्रहरी लगायतको उपस्थितीमा पुरस्कार कोष स्थापना गर्नेबारे निर्ण्र्ााा पुगेका छन् । उनीहरुले डायसपोराबाटै जिल्लाको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । कोषको रासि नेपाली रुपैया २ लाखको हाराहारीमा रहनेकुरा एक सहभागिले बताएका छन । पर्ूवाञ्चलको सदरमुकाम धनकुटा जिल्लाको शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक विकास र प्रगति संगै साहित्यिक र सांस्कृतिक पक्षलाई पनि संगै अगाडी लैजानु पर्ने आवश्यकतालाई औल्याउदै । आफ्नो छुट्टै पहिचान र अस्थित्व राख्ने गरिमामय धनकुटा जिल्लाको सौर्न्दर्यलाई अझ भरिपूण्ा बनाउन साहित्य र संगीत क्षेत्रले खेल्ने महत्वपूण्ा भूमिकाको ख्याल राख्दै । आफ्नो गाँउठाँउको इज्वत, नामसुवास नै हामी प्रत्येक ब्यक्तिको परिचय बन्ने भएकोले हामी जहाजहा रहे पनि हाम्रो प्यारो गाँउठाँउलाई माया गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै धनकुटा जिल्लाको प्रतिष्ठा यस जिल्लालाई जन्मभूमि भन्न पाउने, कर्मभूमि बनाउन पाउने भाग्यमानी स्रष्टार्सजकहरुको सभ्यता र प्रगतिमा निर्भर रहने भएकोले साहित्य र संगीतमा लाग्ने स्रष्टाहरुलाई सानै भए पनि हौसला र प्रोत्साहन प्रदान गर्नको निम्ति धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोषको स्थापना हुने भएको छ ।
प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार धनकुटामा जन्मिएका वा धनकुटा जिल्लालाई कर्मभूमि बनाएका स्रष्टाहरु मध्ये प्रत्येक बर्षसाहित्य क्षेत्रका १ जना र संगीत क्षेत्रका १ जना प्रतिभालाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिनेछ । धनकुटा जिल्लाबासी अर्थात धनकुटा जिल्ला संग जन्मसिद्ध र कर्मसिद्ध सम्बन्ध राख्ने देशविदेशमा रहेका इच्छुक धनकुटेलीहरुबाट प्राप्त सहयोग तथा अनुदानबाट यस धनकुटा प्रतिभा पुरस्कारको अक्षय कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त अक्षयकोषबाट प्राप्त ब्याजबाट पुरस्कार प्रदान र सम्मान गरिनेछ । यो संस्था विशुद्ध सामाजिक संस्था हुनेछ । कुनै पनि राजनैतिक पार्टर्ीींग सम्बद्ध हुनेछैन । जुनसुकै राजनैतिक विचारधारा बोक्ने भए पनि आफ्नो जिल्लाको प्रतिष्ठाको लागि ती कुराहरु बिर्सिएर यस संस्थामा संलग्न रहनु पर्नेछ भनिएको छ । यस कोषलाई यथासम्भव सबै बर्ग, क्षेत्र र जातजाति समेट्दै समावेसी बनाइने छ । जिल्ला भित्र पारदर्शि रुपबाट संचालित भएको कुनै साहित्यिक संस्था भए त्यो संस्था मार्फ यो कोष संचालन गरिनेछ । अन्यथा एउटा समावेसी संस्थाको स्थापना गरि कोष संचालन गरिनेछ । कोष संचालन निष्पक्ष, पारदर्शि र दर्ीघकालिन हुने बताइएको छ । धनकुटाका अग्रज स्रष्टाहरुलाई स-सम्मान अभिभावकको रुपमा स्वीकार्दै विशेषत युवा प्रतिभाहरुलाई सहभागिताको लागि प्रोत्साहित गरिएको छ । विश्वभर छरिएर रहेका धनकुटेली जो कोही स्वेच्छाले सहभागि बन्न सक्नेछन् र प्रगति प्रतिवेदन लगायत आय ब्यय र्सवसाधारण सबैले हर्ेन पाउनेछन् । सबै सहयोगी दाताहरुको नामावली सुरक्षित राखिनुको साथै वेभपेज र स्मारिकामा प्रकाशित गरिने छ । नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा लगायत जुनसुकै मातृभाषाका स्रष्टाहरुलाई पनि समावेसी ढङ्गले पुरस्कार प्रदान एवं सम्मान गरिनेेछ । पुरस्कार तथा सम्मान छनौटमा प्रजातान्त्रिक प्रकृया अपनाइने छ । यथासम्भव भोटिङ प्रकियाबाट निर्ण्र्ाागरिनेछ । साहित्य र संगीत बाहेक जिल्लाको इज्वत बढाउने जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप जस्तैः खेलकुदमा उत्कृष्ट, परिक्षामा उत्कृष्ट, समाजसेवी अर्थात यस पुरस्कार कोष संचालक कमिटीले सम्मान योग्य महशुस गरेको ब्यक्ति वा संस्थालाई सम्मान गर्नेछ । अक्षयकोषबाट प्राप्त ब्याजी रकम पुरस्कार र सम्मानको लागि मात्र प्रयोग गर्नपाउने जनाइएको छ ।
प्रतिभा पुरस्कार कोष रासी सानै भएपनि सधैसधैलाई रहिरहनेछ । संस्थाले विविध कार्यक्रमबाट आयआर्जन गरि साहित्यिक पत्रिका, वेभ पत्रिका प्रकाशन, साहित्यक भिडियो पत्रिका, अडियो पत्रिका लगायत स्रष्टाका पुस्तक तथा गीती क्यासेटहरु प्रकाशन गर्न सक्नेछ । यस संस्था स्थापनाको लागि बिटि्रस गोर्खाज (वेलायती) लाहूरेहरुको सक्रिय भूमिका रहेपनि विश्वभर छरिएर रहेका धनकुटेली तथा स्थानिय जिल्लावासीहरुको मुख्य सहभागिता रहनेछ । यस संस्थाको कार्यालय धनकुटामै रहने कुरा जनाइएको छ । कोष स्थापनाको लागि पैसा उठाउनेक्रम धमाधम चलिरहेको कुरा बताएका छन् ।
कोष स्थापना र संचालन गर्न संगठित रुपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमाथि बहस र छलफल गरि सल्लाह सुझाव दिनुहुन विश्वभर छरिएर रहनु भएका समस्त धनकुटेली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अनुरोध पनि गरिएको छ । आफ्नो जन्मजिल्ला तथा कर्मजिल्लालाई सम्झेर यस संस्था स्थापना र संचालनको निम्ति आफ्नो राय सुझाव ourDhankuta@gmail.com पठाउनु हुन एवं फोनः ०७८७८५३३५८२ मा सर्म्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । विस्तृत जानकारीको लागि प्रतिभा पुरस्कार कोषको वेभपेज www.sahitya.org.np हेनुहुन अनुरोध गरिएको छ ।